Fatahaado Khasaare geestay oo ku dhuftay Wadanka Maleysia - iftineducation.com
Fatahaado Khasaare geestay oo ku dhuftay Wadanka Maleysia
iftineducation.com – Ku dhawaad 13 qof ayaa ku dhimatay ilaa 180,000 oo kalana waa ku barakaceen fatahaado xoogan oo ku dhuftay dalka Malaysia.
Kooxaha bad baadada ee dalka Malaysia ayaa Dadaal adag ugu jira inay samata bixiyaan kumanaan qof oo ay saameeyeen Daadadka xoogan ee ku fatahay gobolo ka mid ah dalkaasi, Fatahaadahan ayaa la sheegayaa inay yihiin fatahaadihii ugu xumaa ee ku dhufta dalkaasi mudo 30 sano ka badan.
Ra iisal wasaaraha dalkaasi Najib Razak ayaa ka soo noqday fasax uu ku dalxiisayay gobolka Hawaii si uu u hogaamiye kooxaha gurmadka qaranka ee u gurmanaysa dadkaasi ay masiibooyinka daadadku ku habsadeen.
Dadka reer Malaysia ayaa aad uga xumaaday kadib markii ay arkeen Ra’isul Wasaarahooda Najib Razak oo ciyaarta golf-ka la ciyaaraya Barack Obama xili uu Mareykanka fasax ku joogay.
Dad goobjoog ah ayaa sheegaya in tuulooyin badan laga qaxay kadib markii ay fatahaadaha saameeyeen, Korontadii ayaa ka go’day, Goobihii ganacsiga iyo guryihii biyo ayaa soo galay, waxaa intaa dheer sahaydii ayaa tuulooyinka qaar ka go’ay.
Interpol oo Gacanta ku dhigay nin Kenyan oo ka Ganacsan Jiray Feenta Maroodiga